Huteel Cusub Oo Xadhiga Laga Jaray - Cakaara News
Huteel Cusub Oo Xadhiga Laga Jaray
Wajaale(CN) Khamiis, 26ka Nov. 2015, Waxaa maanta xadhiga laga jaray dhisme huteel cusub oo laga dhisay Qabalaha Tog Wajaale ee Dagmada Awbare. Huteelkan cusub oo la magac baxay RAYAN HOTEL ayaa waxaa dhistay ganacsade u dhashay Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu magacaabo Xaaji Cumar Xasan iyadoo dhismaha huteelkan ay ku baxday aduun lacageed oo dhan 24 Million oo birr. Dhismahan cusub ayaana fursad shaqo abuur ah u samayn doona muwaadiniin tiradoodu gaadhayso 46 qof.
Huteelkan oo ah G+1 ayaa bixin doona baahida adeeg ee kala ah jiifka, cunto iyo cabitaan iyo waliba meelaha baabuurta la dhigto intaba.
Dhismahan ayaa waxaa si wada jir ah xadhiga uga jaray madaxa Arimaha Xisbiga degmada awbare mudane Xikim Axmed Khaliif iyo qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Deegaanka oo uu ugu horeeyo Mudane Cabdikariin Qalinle.
Ugu dambayna, waxaa hadalo kooban kasoo jeediyay munaasabada xadhig kajarka huteelkan Madaxa Arimaha Xisbiga iyo Odayaasha Deegaanka oo sheegay inay tahay wax ku dayasho mudan maalgashiga intaa le'eg ee laga hirgaliyay Tuulada Wajaale isagoo faa'iido wayn u yeelan doona bulshada.